Kumuu ahaa ninkii isku qarxiyay saldhigga Wisil? | KEYDMEDIA ONLINE
Kumuu ahaa ninkii isku qarxiyay saldhigga Wisil?
Wuxuu Kooxda Al-Shabaab ku biiray isagoo 16 jir ah, 12 sano ayuu usoo dagaalamay, wuxuuna ugu dambeyn isku qarxiyay saldhigga degaanka Wasil.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay wareysi uu bixiyay wiil dhalinyaro ah oo ay xag-jireysay kaasoo u adeegsaday qaraxii Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay degaanka Wasil ee gobolka Mudug.
Is-miidaamiyaha waxuu magaciisa ku sheegay C/llaahi Maxa'ed Aadan oo looga dhex-yaqaanay Kooxda [C/llaahi Jeeri], wuxuu ku biiray Al-Shabaab isagoo aad u da'yar oo 16 jir ah, illaa 12 sano ayuuna usoo dagaalamayay.
C/llaahi Jeeri ayaa sheegay inuu ku dhashay degmada Rabdhuure, Bakool, oo Al-Shabaab ay maamusho, wuxuuna kasoo jeeday Beesha Hadame, oo inta badan degta gobolkaasi.
Dardaarankiisii ugu dambeeyay ayaa muujinaya in la xagjireeyay isagoo aan waxba baran xiliga Iskuulka uu aadi lahaa, loona adeegsaday falalka argagaxiso ee ka dhacayay Soomaaliya, oo ugu dambeyn is-qarxin ku sameeyay askar Soomaaliyeed oo saldhigooda Wasil ku weeraray.
C/llaahi Jeeri ayaa isku qarxiyay albaabka saldhigga Wisil si uu dagaalyahanada la socday uu ugu sahlo inay gudaha galaan. Wuxuu ku dhintay qaraxii jirkiisa lagu soo xiray isagoo 28 jir ah, gacantiisa ayuu kusoo afjaray noloshiisa.
Al-Shabaab ayaa waxaa u dagaalamaya dhalinyaro qaarkood ka yar 20 sano, kuwaasoo ay ka qoroto Kooxda degaanada Miyiga ah, maadaama dadka halkaas ku nool caruurtooda aan iskuullo waxku bartaan haysan, oo xoolo-dhaqato u badan yihiin.
Waxay Al-Shabaab ku sameysay dagaalkeeda isbedel, iyadoo kusoo kordhisay is-qarxinta oo horey aan looga aqoon Soomaaliya intii dagaallada ay ka socdeen tan iyo 1991-dii.